Nchoputa Neuropsychologia na ntulee ihe gbasara ikwu okwu (uto ya) - Nzuzo
Nchoputa Neuropsychologia na ntulee ihe omuma banyere ikwu okwu (uto ya)
Here nọ ebe a: Home » Ọrụ anyị » ỌR --A - hoodmụaka na oge ntorobịa » Nchoputa Neuropsychologia na ntulee ihe omuma banyere ikwu okwu (uto ya)
Isnye ka ọ bụ: Childrenmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma nwere nsogbu ụlọ akwụkwọ
Ogologo oge ole ka ọ ga-adịgide: 2-3 ụbọchị odika
Ego ole ọ na-efu: 304
Otu esi agwụ: Akụkọ ikpeazụ na nchọpụta ọrịa (DSA)
Nchọpụta ASD nkeonwe ọ̀ bara uru n'ụlọ akwụkwọ?
Kedu ihe nyocha nke akwara ozi na usoro ikwu okwu?
Ebumnuche nke usoro nchọpụta ahụ bụ ịrụ otu ezi ntule nke nka na ihe isi ike nke nwa nwoke, okwu e ule tozuru oke iji tulee amamịghe n'ọtụtụ ebe.
Ugwu a nyochara nwere ike idi otutu, tinyere asụsụ, na ncheta, Theattenzione na usọ nke echiche. N'ihe banyere nsogbu ụlọ akwụkwọ, a na-achịkwa ule izizi maka mmụta.ọgụgụ, ide e ngụkọta oge).
Na njedebe nke nyocha ahụ, a na-ewepụta ederede edepụtara nke akọwara isi ihe (ike na ike) nke mmadụ.
N'ụfọdụ ọnọdụ njirimara ndị a na-ahapụ ime nyocha nke nsogbu mmụta mmụta akọwapụtara (dyslexia, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia), ntị nsogbu (ADHD) na / ma ọ bụ nsogbu mmụta asụsụ.
Nchọpụta DSA ọ bụla enyere na njedebe nke nyocha ahụ ka a na-anakwere na Emilia-Romagna dịka nchọpụta sitere na Servicelọ Ọrụ Ahụ Ike Ọrịa, dị ka ntuziaka DSA nke Emilia-Romagna Mpaghara chọrọ.
Kedu onye maka ya?
Typezọ a dị mma maka ọtụtụ ụdị ọnọdụ. Iji maa atụ, mgbe onye ahụ na -enwe ihe isi ike n’ịnọgide lekwasị anya, icheta ozi na usoro (ederede ga-amụ, tebụl ngụkọta, usoro ịgbakọ ...), ịkọwapụta echiche, ịgụ ihe nke ọma na nghọta ederede na ede. Karịsịa, ọ bara uru mgbe echere ụfọdụ n'ime ọnọdụ ndị a:
dyslexia (nsogbu ọgụgụ)
dysorthography (nsogbu mkpoputa)
dyscalculia nsogbu gbakọọ
dysgraphia (nsogbu na -eme ede legible)
ADHD (ntị na mkpachapụ nsogbu)
Okwu na-enye nsogbu
Ajụjụ ọnụ. Ọ bụ oge nghọta iji kpokọta ozi bara uru na akụkọ ntolite nke ọrịa. Usoro a na - enyere aka ịchọpụta nsogbu enwere ike ma na - enye usoro mbụ iji melite usoro nyocha.
Nyocha na usoro nyocha. N'oge ntule ahụ, nwatakịrị ahụ (ma ọ bụ nwa nwoke ahụ) ga-anwale ule ụfọdụ nwere ebumnuche, n'ozuzu ya, iji nyochaa ọrụ ọgụgụ isi na arụmọrụ mmụta.
Ndepụta akụkọ na nloghachi ajụjụ ọnụ. Na ngwụsị nke usoro nchọpụta, a ga-edepụta akụkọ nke ga-achịkọta ihe pụtara na akụkụ ndị gara aga. A ga-akọkwa ihe ndị dị na ntinye aka. A ga-ekpesa akụkọ a ma kọwaara ndị nne na nna oge a ga-eme nloghachi, na-akọwa nkwubi okwu ndị a ruru na usoro ntinye ihe ga-esi na ya pụta.
Gịnị ga-eme ọzọ?
Dabere na ihe si na ntule ahụ pụta, enwere ike itinye usoro dị iche iche:
N'ọnọdụ nsogbu mmụta mmụta akọwapụtara, site na Jehova iwu 170/2010, ụlọ akwụkwọ ahụ ga-ewepụta akwụkwọ akpọrọ Ahaziri Didactic Plan (PDP), nke ọ ga - egosiputa ihe eji emezi ego na inye ya ihe o gha eme iji hazie nkuzi ya n'uzo omuma nwata / nwoke (lee kwa: nyocha DSA: kedu ihe ozo ga - eme?).
N'ọnọdụ isi ike ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ ntị ma ọ bụ ncheta, ọ ga-ekwe omume ịhazi atụmatụ izizi ahaziri ahazi site na okirikiri ije ozi. BES (Mkpa Agụmakwụkwọ Pụrụ Iche).
Ọzọkwa, nzukọ nke okwu Agwọ iji meziwanye akụkụ metụtara asụsụ ma ọ bụ mmụta (ọgụgụ, ederede na ịgbakọ), Ọmụmụ neuropsychology iji mee ka nlebara anya na ọgụgụ ihe ncheta na usoro ọzụzụ ndị nne na nna iji chọta atụmatụ dị mma maka ijikwa nsogbu akparamagwa ụmụaka.